मलेसिया सरकारले कामदारका लागि यस्तो सुबिधा दिने ! - jagritikhabar.com
मलेसिया सरकारले कामदारका लागि यस्तो सुबिधा दिने !
सरवणनले ICLQ को निर्माणको पहिलो चरण अक्टोबर २०२२ सम्ममा सम्पन्न हुने बताउनुभयो, र यसमा ८००० कामदारहरू बस्ने २२२ इकाइहरू सम्मिलित होस्टेलका चार ब्लकहरू हुनेछन्। निर्माणको दोस्रो चरण, जुन अक्टोबर २०२२ पछि सुरु हुनेछ, अन्य ८००० कामदारहरूलाई समायोजन गर्ने आवास समावेश हुनेछ।
“ICLQ पहलले सुनिश्चित गर्नेछ कि कामदारहरूको आ’न्दोलनलाई निय’न्त्रण गर्न सकिन्छ, कुनै भीडभाड, साँघुरो र फोहोर बसोबासलाई रोक्नको साथै हामीलाई (अधिकारीहरू लाई) सार्वजनिक आवास, सुरक्षा र स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालना गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ। यसले रोगहरू विशेष गरी को’भिड-१९ लाई रोक्न मद्दत गर्नेछ। ,” उसले भन्यो।
“अहिलेसम्म, मन्त्रालयले ९०२५६ विदेशी कामदारहरूलाई समायोजन गर्न राष्ट्रव्यापी ६२८ केन्द्रीकृत श्रम क्वार्टर (CLQs) स्वीकृत गरेको छ, र ती हाल निर्माणाधीन छन्। “अन्य ३६० CLQs ३१५०० विदेशी कामदारहरूलाई समायोजन गर्ने योजना चरणमा छन्,” उनले भने।